Nokuba andikuthandi ukugaxelwa, kuya kufuneka ndivume ukuba kukho amaxesha apho abantu bayifumene khona idilesi yam ye-imeyile kwaye banxibelelana nam ngeshishini elisemthethweni. Ngapha koko, ndiqeshe iikontraka ezimbalwa kwaye ndathenga amaqonga ambalwa kwezi imeyile zingacelwanga zithunyelwe kum.
Kwixesha elidlulileyo, ndiyenzile (igesi) engenakucingwa kwaye uthenge uluhlu lwe-imeyile eninzi. Lushishino lokwenyani ngokwenene, nangona kunjalo, ke amathuba akho wokonakalisa igama lakho kunye nokuvalwa ngumthengisi wemeyile aphezulu. Ukuba wenza oku, ungcono uludwe ngokusebenzisa isixhobo sobukrelekrele be-imeyile ukuqinisekisa ukuba awungenisi ii-imeyile zomgibe zogaxekile kunye nee-imeyile eziza kubuyisa.
tags: b2bfumana idilesi ye-imeyilefumana iidilesi ze-imeyilefumana iidilesi ze-imeyile kwi-linkinyiprospectgsuiteLinkedInukuthengisa